Pink: Rehefa bare ny orinasa | Martech Zone
Alatsinainy, 1 Jona, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Rehefa tonga tany an-trano ny zanako vavy 15 taona nitondra kitapo Victoria Secret teny an-tànany dia saika tapaka lalan-dra aho. Raisiko an-tanan-droa ny fanehoan-kevitra rehetra amin'ity lahatsoratra ity momba ny maha-ray mahatsiravina ahy ary tokony hanara-maso tsara kokoa ny fividianan'ny zanako vavy aho.
Raha ny marina dia tsy nieritreritra aho hoe misy antony tokony hiantsenany ao amin'ny Victoria Secret nandritra ny taona maro. Fantatrao… rehefa maty aho.
Ny akanjon'ny zanako vavy rehetra dia miakanjo akanjo mitovy aminy amin'izao fotoana izao… Pink manerana ny vodin'izy ireo. Nieritreritra aho fa marika vaovao io, tsara tarehy nomena anarana hisarihana tovovavy tanora. Hita fa marina ny ahy, saingy tsy fantatro hoe i Victoria Secret no tao ambadik'izany. Victoria Secret dia mivoaka miaraka amin'ny azy ireo Pink tsipika - miaraka amin'ny tranonkala Pink, tsipika Collegiate of Pink, tambajotra sosialy antsoina hoe Firenena mavokely - Azonao atao ny manamarina azy Facebook mazava ho azy, mozika, fampidinana ary mpamorona t-shirt aza.
Azoko atao angamba ny mahatakatra fa maniry ny hanitatra ny fanangonana azy i Victoria Secret ary hahatratra vondrona demografika samihafa, saingy ny fahatongavan'ireo tanora tanora dia somary mifanakaiky kely amin'ny trano. Toy ny namana tsara Adam Small (Indianapolis Mobile Marketing) tonga lafatra,
Pink dia toa zava-mahadomelina fidirana ho an'i Victoria Secret mba hahatonga ny tovovavy hiditra amin'ny marika efa taloha be.
Ny tena nahagaga ahy dia ny Victoria Secret mazava ho azy fa nanondro ireo zatovo ho toy ny fahafaha-manao tsena vaovao. Ny akanjo mora vidy kokoa noho ny mpifaninana amin'i Abercrombie & Fitch ary Hollister… ary hita izany mandany vola ny tanora toy ny olon-drehetra ihany.
Raha izaho manokana dia iriko fa lafo loatra ho an'ny zanako 15 taona ny làlan'ny vokatra.
Fotoana izao hampiodina ny orinasanao
2 Jun 2009 amin'ny 1:42 AM
Miala tsiny aho fa tsy afaka milaza izay tianao ho re, nanambady aho herinandro taorian'ny nahatratra 17 taona. Fantatro hoe manao ahoana ny atao hoe vehivavy / zaza. Fotoana sarotra tokoa ho an'ny zazavavy ity, tampoka eo dia mijery azy ireo izao tontolo izao, ary VEHIVAVY izy ireo fa tsy zazavavy. Ny toro-hevitra tokana ataoko dia ny hahazoana antoka fa fantany ny fitiavanao azy sy ny misy azy ho anao - na inona na inona - ary manome fotoana be dia be hiatrehany asa sarotra sy andraikitra hahafahany miasa amin'ny fitomboana. Alao antoka fa fantany fa marina ny fitondran'ireo zazalahy tsara sy manaja azy, ary ho tonga hisambotra azy rehefa lavo izy. (Toa karatra fiarahabana ve izany? Miala tsiny) Raha ny PINK, dia tsikaritro fa tany am-piasana ny sasany tamin'ireo tovovavy dia nanomboka nandefa mailaka fandraharahana tamin'ny karazana mavokely, mifandraika amin'ny hafahafa? Ary ankehitriny rehefa antitra aho dia manaiky aho, iriko fa tsy dia nalaza loatra ny fivarotana firaisana ara-nofo ho an'ny tovovavy - na nekena.
2 Jun 2009 amin'ny 5:15 AM
Manampy amin'ny fanazavana ahy ianao zavatra iray ary izany no antony mahatonga ny ankizivavy maro hanana teny PINK amin'ny vodin'izy ireo. Fantatro izao! Misaotra ahy manabe ahy sy manome vilona ahy raha mangataka PINKwear ny zanako vavy 8 taona. Tsy hitranga izany (amin'izao dia izao).